Akụkọ - Otu esi ahọta ihe eji ebi nge ihu n’igwe igwe na-ebi akwụkwọ
Etu ị ga-esi ahota ihe eji ebi akwụkwọ na igwe igwe eji ebi akwụkwọ
1. Oghere ihuenyo
N'ikwu okwu n'ozuzu, okpokolo agba eji eme ihe na ntanetị na-abụkarị okpokoro aluminom. Ndị ọrụ maka otuto nke aluminom nke ukwuu maka ndị na-eguzogide tensile, ike dị elu, ezigbo mma, ịdị arọ, na iji ya arụ ọrụ. Nha na ihe nke eku ihuenyo na-arụ ọrụ dị mkpa na ogo ihuenyo.
The waya ntupu na-ekewa polyester waya ntupu, naịlọn waya ntupu na igwe anaghị agba nchara waya ntupu, na na-na-ekewa n'ime multi-waya ntupu na monofilament waya ntupu. Ọ dabere na izi ezi nke ederede ebipụta, ogo mbipụta yana ihe ndị ahịa chọrọ. Ọtụtụ mgbe, ngwaahịa ndị dị mma na-eji ihuenyo monofilament.
3. Gbatịa ụgbụ
A na-agbatịkarị ihe mkpuchi alloy nke alumini site na pneumatic stretcher iji hụ na esemokwu nke ihuenyo ahụ. Iji mezuo nke kacha mma obibi akwụkwọ mma, erughị ala nke ihuenyo ga-edo. Ọ bụrụ na esemokwu ahụ dị oke elu, ihuenyo ga-emebi emebi ma enweghị ike ibipụta; ma ọ bụrụ na erughị ala bụ kwa ala, ọ ga-eme ka ala ebi akwụkwọ àgwà na adabaghị overprinting. Esemokwu nke ihuenyo na-adabere na nrụgide obibi ihuenyo, mbipụta ziri ezi na ịgbatị nguzo nke ihuenyo.
Njirimara anụ ahụ nke inks na-ebipụta akwụkwọ na-agụnyekarị njupụta, mma, mmiri mmiri na nguzo ọkụ, wdg, nke nwere mmetụta dị ukwuu na ogo na mmetụta pụrụ iche nke ihe ebipụtara. Ọ bụrụ na njupụta ahụ adịtụghị mma, mma ahụ na-ezute ihe ndị a chọrọ, mmiri mmiri nke ink etinyere dị mma, na nguzogide ọkụ dị mma, ngwaahịa e biri ebi nwere ike nweta nsonaazụ achọrọ. Inks na-ekewa n'ime ihe mgbaze ndị na-adabere n'ihe mgbaze (ihicha eke) na inks UV nke nwere ike ịgwọta. Dịka ihe akụrụngwa na usoro obibi akwụkwọ chọrọ si dị, họta ink dakọtara.
Na igwe obibi akwụkwọ igwe na-ebi akwụkwọ, ihe nbipute ihuenyo na-emetụta ogo nke ngwaahịa ikpeazụ emechara, dị ka akụrụngwa na-ezighi ezi, efere obibi akwụkwọ, ink, nhazi na njikwa ọrụ ga-eme ka mbipụta mbipụta ghara ịdị.
Jiri usoro kwesịrị ekwesị iji merie ya.
Silkscreen Printing Machine, Silk Screen Printing Machine, Ihuenyo Silk Printing Machine, Igwe Mbipụta Igwe, Akpaaka Screen Printing Machine, Glass Screen Printing Machine,